Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Japoney hamarana ny fanjakana vonjy taitra COVID-19 amin'ity herinandro ity
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Na izany aza, ny governemanta Japoney dia toa mihevitra ny hamela ny governora hametaka fepetra mifanohitra amin'ny COVID-19 mandritra ny volana aorian'ny tapitra ny fameperana efa misy.
Ny fanjakana vonjy maika COVID-19 tany Japon dia ny lava indrindra tamin'ny alalàn'ny areti-mandringana.
Nilaza ny praiminisitra japoney fa handray fanapahan-kevitra ofisialy ny governemanta ny talata hariva izao.
COVID-19 fanjakana vonjy taitra no mandrakotra an'i Tokyo sy prefektiora 18 manerana ny firenena.
Ny governemanta Japon dia antenaina tsy hanitatra ny fanjakana vonjy maika COVID-19 mandrakotra an'i Tokyo sy prefektiora 18 manerana ny firenena rehefa tapitra ny faran'ny volana septambra izao, hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta ny alatsinainy teo.
Ny fanjakana maika fahadimy an'ny firenena, izay nambara voalohany tao amin'ny prefektiora efatra tamin'ny volana aprily, no lava indrindra. Niitatra tamin'ny prefektiora 25 fanampiny izy io talohan'ny nakana azy tamin'ny volana Jona rehetra fa Okinawa kosa. Natolotra tany Tokyo indray ny didy tamin'ny volana Jolay, na izany aza, rehefa nanomboka nipoitra indray teto an-drenivohitra ny faran'ny volana Jona.
Ny firenena Ny praiminisitra Yoshihide Suga tamin'ny mpanao gazety fa handray fanapahan-kevitra ofisialy ny taliny hariva ny governemany aorian'ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo manam-pahaizana momba ny areti-mifindra avy amin'ny kaomity vaovaon'ny governemanta foibe.
Na izany aza, nanampy i Suga fa ilaina ny manamaivana tsikelikely ny famerana COVID-19.
If JapanaNy fanjakana vonjy taitra, mavitrika amina prefektiora 19 izao, dia nesorina tanteraka, sambany hatramin'ny voalohan'ny volana aprily no tsy misy prefektiora voafehin'ny governemanta COVID-19.
Hatreto dia mbola tsy nisy nangataka ny fanitarana ny vonjy taitra ny iray amin'ireo prefektiora 19.
"Toa hain'ny governemanta ny manaisotra ny vonjy maika toy ny kasaina hatao amin'ny faran'ny volana," hoy ny minisitry ny fahasalamana Norihisa Tamura nandritra ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra ny alahady.
Na dia mihena aza ny tranga vaovao, dia nampitandrina ny vahoaka ny tamura mba tsy hamela ny mpiambina azy ireo noho ny tahotra sao hiteraka fikomiana amin'ny ririnina. Nanampy izy fa ny fameperana isan-karazany, ao anatin'izany ny fihenan'ny ora fiasan'ny trano fisakafoanana sy ny fisotroana, dia tokony hialana volo tsikelikely ary tokony hanamafy ny fahaizan'ny fikarakarana ara-pahasalamana ny tompon'andraikitra - amin'ny alàlan'ny fametrahana fotodrafitrasa fanampiny ho an'ireo marary be loatra. ary ny fividianana mpitsabo, ankoatry ny zavatra hafa - ho fiomanana amin'ny valanaretina manaraka.
Tamin'ny herinandro lasa, JapanaNy czar vaksinin'ny Taro Kono dia nanambara fa hanomboka hitarika fantsom-booster COVID-19 amin'ny mpitsabo ny firenena amin'ny faran'ny taona, sy ho an'ireo be taona amin'ny taona vaovao.
Hatramin'ny alatsinainy teo dia manodidina ny 52% ny mponina ao Japon no nahazo vaksiny roa vaksinin'ny COVID-19.